Wararka Maanta: Sabti, Apr 14, 2012-Hay’adda Laanqeynta Cas ee ICRC oo raashin gargaar ah ka qaybisay qeybo ka mid ah Gobolka Hiiraan
Hay’adda Laanqeynta Cas ee ICRC oo raashin gargaar ah ka qaybisay qeybo ka mid ah Gobolka Hiiraan Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Mudo dhowr sano laga joogo kaddib ayay hay’adda ICRC gargaar raashin ah gaarsiiyay dad ku dhibaateysan qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan, kuwaasoo inta muddo ah ka cabanayay nolal xumo lasoo dirstay.
Cunadan ay qeybisay hay’adda oo ah marka dhinaca laga eego mid tayo leh ayaa isugu jirtay Bariis, Saliid, iyo waliba Digir sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah mas’uuliyiinta hay’adda ICRC.
Waxaa ka faa’ideystay gargaarka ay bixisay hay’adda boqolaal qoys oo ku dhaqan deeganno kala gadisan oo intooda badan hoos taga degmada Beledweyne, waxaana ka mid ah goobaha raashin-ka laga qeybiyay Ceel-gaal, Kala-beyr, Jawiil, Ilka-cado, Qooqane Hiiraan, iyo waliba deegaanno kale oo ay ku noolaayeen qoysas u baahnaa gargaar noocan oo kale ah.
Guddoomiyaha maamulka gobollka Hiiraan C/fitaax Xassan Afrax ayaa soo kormeeray deegaannada laga qaabiyay gargaarka, isaga oo u kuur-galyay sida ay u socdaan howlaha dadka lagu gaarsiinayo gargaarka, waxaana uu kulamo la qaatay odayaasha iyo waxgaradka goobihii uu booqday.
Deeqday ay maanta ka qeybisay gobollka hay’adda ICRC ayaa ku soo beegmeysa xili dhawaan guddoomiyaha maamulka gobollka Hiiraan uu ugu baaqay hay’adda samafalka in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gargaaraan dadka ku dhibaateysan gobollka Hiiraan.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobollka Hiiraan ayaa waxaa gacan ku heynteeda la wareegay dabayaaqdii sanadkii hore ciidamada maamulka gobollka Hiiraan oo gacan militari ka helaya kuwa Itoobiya.
Sabti, Abriil 14, 2012 (HOL) — Kooxo hubeysan ayaa xalay laba qof siyaabo kala duwan ugu dilay degmooyinka Wardhiigley iyo Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, iyadoo mid ka mid ah labadan qof la sheegay inuu ka tirsanaa dowladda KMG ah. Somali News